Laptop USB Mouse Problem — MYSTERY ZILLION
Laptop USB Mouse Problem
အိမ်ကကျွန်တော် ့laptop က အထူးအဆန်းဖြစ်နေတာ ကျွန်တော် ့laptop က power adaptor တပ်လိုက်တာနဲ့Usb mouse ကမရတော့ဘူးဖြစ်နေတယ် ဗျာ power adaptor ပြန်ဖြုတ်ပီး usb mouse ကိုပြန်တပ်လိုက်တော့လည်းအကောင်းပဲ ဖြစ်နေတယ် အဲဒါဘယ်လို ဖြစ်တာလဲ မသိဘူး ဆိုင်သွားပီး window ပြန်တင်တော့လဲ ဆိုင်မှာစမ်းပေးလိုက်တော့အကောင်းပဲ အိမ်ရောက်တော့ပြန်ဖြစ်ပြန်ရော သိတဲ ့သူများရှိရင်ကူညီကြပါဦး
ခုတင်ထားတာက window xp service pack2version 2002 ပါ laptop ကတော compaq Presario V3000 ပါဗျာ တစ်ခါမှမမေးဘူးလို ့အမှားပါရင်ခွင် ့လွှတ်ကြပါနော်
ကျနော့် ပြသနာလေးလဲပြောပြချင်သေးတယ် သိတဲံသူများ ပြောပြကြပါဦး။ကျနော့် laptop က HP G60-44DX ပါ .CPU ကတော့ AMD Dual Core 2.20GHz ပါ.။memory က 3GBs ပါ။
၀ယ်ထားတာ ၁၀ ၇က်လောက်ဘဲ ရှိဦးမယ်။OS က vista home premium ပါ။web cam က ကွန်ပြူတာနဲ့တွဲပြီးပါလာပါတယ်။
ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ အင်တာနက်သုံးရင် အကောင်းဘာမှမဖြစ်ဘူး။gtalk လဲ အေးဆေးဘဲ။
အဲ VZO ၀င်လိုက်ရင် ကျနော်အိမ် နဲ့ပြောတယ်ဗျာ။အိမ်က Dial up လေးနဲ့သုံးတာပေါ့.
အဲဒီမှာ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ကျနော်က VZOအသံမကြားရရင် gtalk ကနေ ခေါ်ပြီးပြောတယ်ဗျာ။
သိတယ်မလား VZO က်ိုလဲ ဖွင့်ထားတယ် gtalk ကနေလဲ စကားပြောတယ် အဲဒီလိုလုပ်တော့
ခဏခဏ ဟန်းဟန်းသွားတယ်ဗျာ။ဟိုဘက်က အသံတွေကြတော့ အကုန်ကြားရတယ်။
ဟိုဘက် ရုပ်တွေကိုလဲ မြင်ရတယ်ဗျာ။.ကျနော်တို့ဘက်က ရုပ်တွေကျတော့မမြင်ရဘူးဖြစ်နေတယ်
အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးပြောပြပါဦး။ကျနော် ဆိုင်ကိုသွားပြန်ပြောမယ်လို့စိတ်ကူူးသေးတယ်။ဘယ်လိုမှမအားတာနဲ့ မသွားဖြစ်တာပါ။အိမ်ကိုုရောက်တော့ ည ၉ နာရီနီးပါး ရှိနေပြီ။အဲဒါကြောင့် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ
ပြောပြကြပါဦး။ကျနော် မြန်မာပြည်မှာတုန်းက Ubuntu ကိုသုံးတယ် ကောင်းတယ်ဗျ.ကြိုက်တယ်
အခု microsoft window ကြီးကိုစိတ်ကုန်တာကြာပြီ။အိမ်နဲ့ အဆက်အသွယ်လုပ်ရမှာမလို့သာ သုံးရတာ.။ကိုယ့်ဟာကိုဆိုရင်တော့ Ubuntu ဘဲ သုံးတယ်။ပြောပြကြပါဦးဗျာ။
hein aung wrote: »
ကျွန်တော်လည်းဖြစ်ပါတယ်........ အဲ့ဒါ က USB Ports တွေကြောင့်ဖြစ်တာပါ........ AC အ၀င်မှာ မီးအားကြောင့် Ports တွေက အလုပ်မလုပ်သလိုဖြစ်ဖြစ်သွားပါတယ်....... မီးကိုအရင်တပ်ပြီးမှ mouse တပ်ကြည့်ပါလား..... ကျွန်တော်က တော့ ဖြုတ်ပြီးပြန်တပ်လိုက်ရင် အဆင်ပြေတယ်......
ဘယ်လို.............. ဘယ်လို................ Dial up နဲ့ VZO ပြောတယ်....... ဟုတ်ရဲ့လားဗျာ.... ကျွန်တော့ Dial up ကတော့ Vzo မပြောနဲ့ Gtalk တောင် ပြောလို့ မရဘူး ရိုက်လို့ပဲရတယ်......... အကိုတို့ နေကြတဲ့ နိုင်ငံလေးတွေ တစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါလား....... Banwidth ကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.........
Virus ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ usb device တွေအတပ်များသွားလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် ဆီမှာ ဖြစ်တော့ Virus ပြန်ရှင်းပါတယ်။ ရှိရှိမရှိရှိ သေချာသွားအောင် အချိန်ပေးပြီး အစအဆုံး virus ပြန်စစ်ပါ။ Tuneup 2009 နဲ့ register တွေကိုပြန်စိစစ်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော့်တုန်းက တော့ပြန်ပြီးကောင်းသွားပါတယ်။
မိုးသက်ထား ကတော့ သူ့စက်နဲ့သူ့အိမ်မှာသုံးတာ Dial-up နဲ့ ....... VZO ပြောလို့ရတယ်လို့ပြောတာပဲဗျာ ......
ကျနော်လဲအဲဒါ အံ့သြနေတာ ....
ပြီးတော့ ..... သူသုံးတာက ရန်ကုန်မှာမဟုတ်ဘူး ..... မော်ကျွန်း မှာ တဲ့ ...... :106:
သုံးလို့ရပါတယ် အခု ကျနော် ရောက်နေတာက USA မှာပါ။ကျနော့်အိမ်ကတော့ ရန်ကုန်မှာဘဲပေါ့။ဒါပေမဲ့သုံးလို့ရပါတယ်။ကျနော် ပြီးခဲတဲ့နှစ် ရန်ကုန်ပြန်တော့ အိမ်ကနေ Dial up နဲ့၀င်ပြီး အင်တာနက်သုံးပါတယ်။တခါတလေမှာဘာတွေတွေ့လဲဆိုတော့ Internet (အဲဒီဆိုင်က 512kbs ကို ၂ လိုင်းဆွဲသုံးထားတဲ့ဆိုင်ပါ)ဆိုင်ကနေသုံးရင်ကြာတဲ့အချိန်မှာ အိမ်ကနေ ၀င်ရင်တော့ မြန်တာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ ကျနော်ထင်တယ် အမြဲတမ်းတော့မဟုတ်နိုင်ဘူး။Dial up ကနေ ၀င်ဘို့တော့ ခက်တာပေါ့ဗျာ။၀င်သွားရင်တော့ ပြီးပြီ။အင်တာနက်ကိုပြောပါတယ်။သုံးလို့ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ရုပ်က အရှင်မဟုတ်ဘူးပေါ့။ရုပ်သေတွေဖြစ်နေတာပေါ့။တခါတရံမှာသာ လှုပ်ရှားမှုလေးဖြစ်ဖြစ်သွားတာပါ။
ပြောလို့ရတယ်ဆိုရုံလေးပါ။အခုဟာက ကျနော့် ကွန်ပြူတာ ကဖြစ်တဲံကိစ္စ က ခေါင်းစားနေတယ်ဗျာ။
VZO ပြောလို့မရဘူး ပြောရင် ဟန်းသွားပြီ Skype ပြောလို့ရတယ်။အဆင်ပြေတယ် ။အဲဒီပြသနာလေးပါ
မနက်ဖြန်အထိရွှေ့လို့ရသော အလုပ်ကို ဒီနေ့အပြီးမလုပ်ပါနဲ့:))
ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဖြေပေးထားပါတယ် ၊ vista ကြောင့်ပါ ။